War deg deg ah:Mid ka mid ah wasiirada cusub oo caawa gacanta ugu jirta Shabaab – SBC
War deg deg ah:Mid ka mid ah wasiirada cusub oo caawa gacanta ugu jirta Shabaab
Mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada cusub ee uu magacaabay Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa caawa gacanta ugu jirta xoogaga Shabaabka oo si weyn uga soo horjeeda dawlada KMG & taageerayaasheeda, isla markaana dagaal kula jirta.
Caasho Cismaan Caqiil oo loo magacaabay 24 saac ka hor wasiirka haweenka & arimaha qoyska ayaa la soo sheegayaa in ay caawa ku xiran tahay saldhiga Booliiska degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe oo ay gacanta kuhayaan xoogaga Shabaabka ka dib markii haweenaydaasi ay iskeed u tagtey saldhigaasi iyadoo sheegtey in aanay wax war ah ka heyn xilka loo magacaabay, isla markaana aanay ka raali aheyn in ay ka mid noqoto wasiirada cusub ee dawlada KMG.
Qof ku sugan degmada Balcad oo codsadey inaan magaciisa saxaafada laga sheegin sababo uu ku macneeyey xasaasiyada warkan uu leeyahay ayaa u sheegay SBC in Marwo Caasho Cismaan Caqiil & qoyskeeda oo degan degmada Balcad ay sheegeen inaanay wax war ah u heyn xilka loo magacaabay isla markaana aan lagu soo wargalin oo ay ka maqashay saxaafada, waxaana ay sheegeen in Caashow aanay diyaar u aheyn in xilkaasi qabato.
Caasho Cismaan Caqiil oo ah aqoonyahan bartey cilmiga dhaqaalaha waxay ka baxdey Jaamacadii Lafoole waxaana dhaley Cismaan Caqiil oo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeelaha dhexe xiligii maamulkii Maxamed Dheere uu ka jiray gobolkaasi.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawlada KMG Soomaaliya oo ku aadan wasiirkan ka tirsan ee saacado ka hor la magaacabay oo caawa gacanta ugu jira xoogaga Shabaabka, sidoo kale lama oga talaabada ay ka qaadan karaan haweenaydan Al-Shabaab.